Bow ibhroshi - umhlobiso yasekuqaleni abaningi abathandi bafake imigexo
Abesifazane abaningi (futhi amadoda kakhulu) uthande ukugqoka izinhlobo ezahlukene ubucwebe. Kungakhathaliseki ikhala, namacici, imigexo, izikhonkwane, namasongo, uthayi-ibhroshi nokuningi.
Othile uthola kubo okukhethekile ezitolo, futhi umuntu kudala yezandla zabo. Abanye abantu bakhetha ubucwebe obubizayo, futhi othile ahlele analogue eshibhile.
Expensive imigexo inkulumo mayelana ukungaguquguquki yomnikazi. Kodwa futhi imigexo ezishibhile ongamtshela okuningi umnini wayo. Into ebaluleke kakhulu - ukukwazi kahle ukukhetha impahla, umbala kanye nosayizi imihlobiso.
Ababaningi abantu abakwaziyo ukuthenga izinto ezibizayo. Ngakho-ke, isandla ezenziwe imigexo, amasongo, uthayi-ibhroshi nokunye kukhona isixazululo kakhulu abalandeli ubucwebe.
Ezenziwe ngesandla - kukhethwa eziningi
Okwamanje, yaziswa kakhulu okudaliwe ngezandla. Ngenxa ucezu ngalunye elenziwe ngezandla zabo, ugcina umphefumulo, imfudumalo nothando master. Izinhlobo ngezandla kakhulu, nawe igama it.
Ngokwesibonelo, cabanga, onjani yezandla ungenza ibhroshi umnsalo. Kanzashi, sutazhnoe ukwelukwa, beading, nabanye - ongakhetha kakhulu. Made in inqubo kanzashi uyibophe ugcizelela bomuntu ngamunye ezinhlelo umnikazi.
Bow ibhroshi izandla siqu
Ukuze uqale, ongalungisa izinto ezidingekayo: kudabuke (satin, lace) anemibala ehlukene, sikelo, iglu-isibhamu (can PVA), ubuhlalu enhle, ubuhlalu zinhlayiya, luqhephuke ngoba iziqhano zokuhloba, ilula ikhandlela, izinto zokuhlobisa nokunye.
umbala ekhethiwe ibhroshi esizayo (umbala ingubo ethile noma isudi noma hlangothi, efanelekayo yisiphi izingubo).
Esikhathini sibalo, ungenza indaba emfushane ka umkhiqizo oyifunayo.
usayizi ekhethiwe. Kwezinye izingubo fit uthayi elincane kodwa umxhwele. Ngaphansi komunye - elikhulu 'iyezwakala.
Isibonelo yokudala accessory ozithandayo
kudabuke lelungiselelwe. Omunye Habib, mayelana amabili nesikhombisa amasentimitha, lace satin ezintathu - ngamasentimitha ayishumi nesithupha, eziyisithupha satin - nane ngamasentimitha. Bonke tente ngesigamu futhi banamathelane, banamathelane sengathi shestnadtsatisantimetrovye: Habib eyodwa ngaphakathi, omunye lace ngaphandle ethe njo ndawonye. Ukuze kunenze nisondelane ungasebenzisa ukwenza ingcina noma ikhandlela encibilikisiwe. Ungakwazi umane thunga.
Ngokulandelayo, inqubo ukusondelana le preforms okuholela ndawonye. On the kwesigaba eside ethe njo satin ezimbili ezincane, kubo - omunye lizwakalise ke lace amabili amancane. Futhi ngakho kuze kube sekupheleni. Okungukuthi, kuvela Amazinga ayisikhombisa.
Isinyathelo esilandelayo - ukwenza umnsalo. It kungenziwa kumasegmenti efanayo satin lace emapheshana ethe njo ndawonye crosswise. Kungase kube kwakhiwa satin itheyiphu rosettes noma ezinye imbali. Uyobizwa ethe njo umsila okuholela. Maphakathi ngomnsalo noma imbali kungenziwa wanamathela bead enhle kakhulu noma cabochon, noma ukuhlobisa rhinestones.
I kwaphumela umnsalo ibhroshi uphelele amaqembu nemikhosi. Uma kukhethwa impahla uwile ukuba ozolile amathoni hlangothi, kanye umhlobiso akuyona esimnandi kakhulu, i-accessory ye ezingase zifaneleke futhi imihlangano yebhizinisi.
Ibhroshi-tie kudabuke emhlanganweni njalo Ubamba iso futhi bangaba umfutho obonakalayo ekuxazululeni izinkinga ebhizinisini. Ngaphezu kwalokho, kuyinto ephelele njengesipho othandekayo.
Ugqoko Ngokhuni: indlela zokuhlobisa amasu "Decoupage"
Crochet Cardigan - indlela engcono kakhulu ukugcizelela ubuntu babo
Ukuze fun futhi kumnandi esikhuthazayo: thunga ivumelane Punch!
Vase ovela ithanga ngezandla zabo. Vase ovela ithanga: isigaba master
Rayon futhi zemvelo. ukungaboni ngaso linye kwabo
Iphethini lolwandle izikhwama. Thunga esikhwameni lolwandle. Ibhishi isikhwama hook
"Trinefron": yokusetshenziswa, incazelo, analogs, ukubuyekezwa
Amawashi U-isikebhe - Inkomba ukuvelela izinga
Toadflax ezivamile: isicelo, izithombe, incazelo
Ukugeza Machine "Atlant": ukubuyekezwa kanye izici
Ukudla okuhlukile: ukubuyekezwa nemigomo
Suzuki Wagon R - super kulondolozwa Japanese idolobha imoto baseYurophu lanky
Umkhosi emidlalweni eyingozi
Baritone - a ... Izinhlobo kanye Izici Baritone
IBaikal Enkhaluk: nokungcebeleka
Isikhathi iwashi futhi ukuba yiqiniso incwadi iphupho
Dream ncwadi. Kungani iphupho Gypsy